» ऋचालाई फिल्ममा टिक्नै सकस !
ऋचालाई फिल्ममा टिक्नै सकस !
२२ श्रावण २०७६, बुधबार ०६:०९
नेपालमा घरजम जोडेपछि अभिनेत्रीको करिअर सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । अपवादबाहेक प्रायः अभिनेत्रीहरुको हकमा यो लागू भएको पनि छ । विवाहपछि फिल्म नपाएर धेरै पलायन भइसके । केही जेनतेन टिकिरहेका छन् । कसैको भने विवाहपछि भाग्य चम्किएको छ । यसको एक उदाहरण हुन्, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का । सिउँदोमा सिन्दूर भरेपछि अभिनेत्रीको करिअर लथालिङ्ग हुन्छ भन्ने मान्यतालाई उनले तोड्न सफल भइन्, जुन धेरैका लागि प्रेरणादायक छ ।
तर, सबैको भाग्य स्वस्तिमाको जस्तै कहाँ हुन्छ र ! विवाहपछि पनि करिअरले उही लोभलाग्दो रफ्तार लिन्थ्यो भने ‘नाईं नभन्नू ल’ बाट सानदार डेब्यू गरेकी अभिनेत्री ऋचासिंह ठकुरी अहिले गुनमान हुनु पर्दैन थियो । डेब्यू फिल्म रिलिजपछि उनले राम्रो क्रेज र स्टारडम बनाएकी थिइन् । फिल्ममेकर उनलाई लिन हानाथाप गर्थे । तर, विवाहपछि उनका लागि यो सबै एकादेशको कथा भएको छ । न अहिले उनलाई फिल्म अफर गर्न कोही पुग्छन् न त चर्चा नै हुने गरेको छ ।
राज थापासँग ऋचाले गएको ५ वर्ष अगाडि लगनगाँठो कसेको थिइन् । घरजम बसाउनुभन्दा अगाडि पैसाको मुख हेरेर गरेका उनका केही फिल्म गएको एक/दुई वर्ष अगाडिसम्म रिलिज भए । तर, हलमा आएको/गएको दर्शकलाई थाहै भएन । सम्भवतः उनी स्वयंलाई पनि भएन होला ! राम्रो क्रेज हुँदा गुणस्तरमा वास्ता नगरेर संख्यात्मक अभिनयमा रमाउँदा उनी जुन गतिमा उकालो चढिन्, त्यही गतिमा आरालो झरिन् । अहिले उनलाई फिल्ममा टिक्नै सकस भइरहेको छ ।